(Warbixin): Maxay Soomaalida ka macaashi lahaayeen Kenya oo ku guuleysata Hoggaaminta Ururka Midowga Afrika ? | Baahin -News, Sports, Views, Entertainment, War On Terror, Health and Social Affairs
(Warbixin): Maxay Soomaalida ka macaashi lahaayeen Kenya oo ku guuleysata Hoggaaminta Ururka Midowga Afrika ?
Gelinkii dambe ee shalay, Hoggaamiyayaasha 54-ka Waddan ee Qaaradda Afrika waxay Kulan ka yeesheen sidii loogu codeyn lahaa Guddoomiyaha cusub ee Ururkaasi, oo ay isku soo sharxeen Siyaasiyiin u kala dhalatay dalalka Kenya, Botoswana, Uganda, Equatorial Guinea iyo Chad.
Dowladaha ay ka soo kala jeedaan Tartamayaashaasi waxay galangal iyo xodxodasho badan u galeen sidii ay u kasban lahaayeen Codadka ugu badan ee Madaxda Dowladaha Afrika.
Kala-qeybsanaan ayaana ka dhex jirtay Cod-bixinta, iyadoo Dowladaha ku hadla Luqadda Faransiiska ee Galbeedka Afrika culayska saareen sidii uu Siyaasi iyaga ka soo jeeda u qaban lahaa xilka Guddoomiyaha cusub ee AU-da.
Madaxda Dowladaha Afrikaanka ee ku hadla Luqadda English-ka ayaa waxaa ka dhex jiray Loolan ku aadan Xilkaasi, mana jirin Murashax keliya oo ay ku mideysnaayeen.
Botoswana Uganda iyo Kenya waxay kala wateen Murashixiin khaas ah, waxayna tafaraaruqaasi ka dhaxleen in looga guuleysto Doorashadaasi.
Madaxda Kenya ayaana la sheegay inay jugdi badan ku bixiyeen sidii ay Wasiirka Arrimaha Dibedda ee Kenya, Amina Maxamed Jibriil ugu guuleysan lahayd Xilkaasi.
Inkastoo ay Dowladda Kenya dadaal iyo kharaj ku bixiyeen arrintaasi, haddana Warbaahinta Kenya waxay badankooda dhaliil ka qorayeen Amina Mohamed oo ah Siyaasi Somali-Kenyan.
Wargeysyadda The Star iyo The Standard ayaana qoray Maqaalo ay si aad ah ugu naqdiyeen Amina Mohamed, kuna sifeeyeen Wasiir gabtay Hawshii Wasaaradda Arrimaha Dibedda.
Falaanqeynta Saxaafadda Kenya ayaana la dhihi kara waxay qeyb ka yihiin dhabar-jabka ay kala kulantay Tartankii Hoggaanka cusub ee Ururka AU-da, waxaana xilkaasi ku soo baxay Siyaasi u dhashay dalka Chad.
Inkastoo Kenya looga guuleystay Doorashadaai, waxay rumeysan yihiin inaysan helin Taageeradii ay ka filayeen dalalka Bariga iyo Bartamaha Afrika, mana kala cadda Dowladda Ethiopia inay taageereen Kenya iyo inay codkooda ugu shubeen Murashaxa ka socday dalka Chad ee ku guuleystay xilka Guddoomiyaha cusub ee AU-da.
Khubarada ka faalloota Arrimaha Siyaasadda Afrika ayaa rumeysan haddii ay Kenya ku guuleysan lahaayeen Guddoomiyaha cusub ee AU-da inay taasi horseedi lahayd Galaangal badan oo ay ku yeeshaan dalalka Afrika, gaar ahaan Arrimaha Somalia iyo Hawlgalka AMISOM.
Saadaasha waxay kaloo muujinaysaa inay Kenya fursad u heli lahaaayeen inay xoojiyaan Joogitaanka ciiddankooda gudaha Somalia, gaar ahaan Askartooda aan ka tirsanayn Hawlgalka AMISOM.
Dowladda Kenya ayaa isku aragta Cududa Labaad ee Siyaasad ahaan iyo Milliteri ahaan ee Geeska Afrika oo soo labayn karta Ethiopia oo haatan hesha Dhaqaalaha ugu badan ee Maraykanka ku bixiyaan Hawlgalladda Nabad-ilaalinta ee dalalka Somalia iyo Koonfurta Sudan.
Si kastaba ha ahaatee, lama wada oran karo Kenya waxay ku hungowday Hoggaaminta Ururka Midowga Afrika, waayo waxay weli si firfircoon ugu lugu leedahay Hawlaha Nabad-ilaalinta, inkastoo ay iska loodin la’ yihiin Weeraradda qorsheysan ee Dagaalamayaasha Alshabaab la beegsadaan Askarta Kenya ee joogta gudaha Somalia.